Caqiid - aragtida aan la arki karin, ee Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxaa weli jira dhowr toddobaad ilaa aan u dabaaldegno dhimashada iyo sarakicidda Ciise. Laba waxyaalood ayaa nagu dhacay markii Ciise dhintay oo la sara kiciyey. Midda koowaad waa inaan isaga la dhintay. Tan labaadna waxay tahay in isaga la innaga soo sara kiciyey.
Rasuul Bawlos sidan ayuu u dhigay sidan: «Haddii hadda laydinla soo sara kiciyey Masiix, raadiya waxa sare, meesha Masiixu joogo, oo fadhiya midigta Ilaah. Raadso waxa sare, ma aha waxa dhulka jooga. Maxaa yeelay, waad dhimatay, oo noloshiinnuna Masiixay kula qarsoon tahay Ilaah. Laakiin haddii Masiixa oo ah noloshiinnii la muujiyo, markaasaad idinkuna ammaan kula soo muuqan doontaan. (Kolosay 3,1: 4).
Sida ku xusan aayadda aan aqrinay iyo dhowr aayood oo kale, waxaan Masiixa kula noolahay boqortooyada jannada. Islaantii hore ayaa dhimatay oo is cusub ayaa nolosha timid. Hada waxaad tahay abuur cusub oo Masiixa ku jira. Runta xiisaha leh ee ah abuurista cusub ee Masiixa ayaa ah in hada nalagu aqoonsaday isaga iyo isagaba. Waa inaanaynaan waligeen isku arkin mid gooni ah, sidii Masiixa uga fogaa. Nolosheenna Masiixa ayaa ku qarsoon Ilaah. Waxaa naloo aqoonsaday Masiixa illaa iyo dhex-mara. Nolosheena ayaa ku jirta. Waa nolosheena. Waxaan nahay mid isaga la jira. Waxaan ku nool nahay. Kaliya ma nihin dadka dhulka deggan; sidoo kale waxaan nahay degganeyaasha jannada. Waxaan jecelahay inaan ku qeexo sida ku noolaanshaha laba aag waqti - mid ku meel gaadh ah, jidh ahaaneed iyo mid daa'im ah, aagga waqtiga jannada. Way fududahay in la yiraahdo waxyaalahaas. Way ka sii adag tahay in la arko. Laakiin waa run xitaa haddii aan la halgano dhammaan dhibaatooyinka maalinlaha ah ee aan la kulano.
Bawlos wuxuu inaga codsanayaa inaanaan fiirin waxa muuqda, laakiin aan diirada saarno waxa aan muuqan: «Taasi waa sababta aynaan u daalin; laakiin haddii ninkeenna dibadda ahu uu maansado, waxa gudaha xaggiisa ka soo cusboonaaday maalinba maalinta ka dambaysa. Sababtoo ah dhibaatadeena, oo ah mid ku meel gaadh ah iyo iftiin, waxay abuurtaa sharaf weligeed iyo welwel badan, innaga, oo aynaan ku arkin wixii la arki karo, laakiin aan la arki karin. Maxaa yeelay waxa muuqda waa ku meel gaadh; laakiin waxa aan la arki karin waa weligiis (2 Korintos 4,16: 18).
Taasi waa sax. Taasi waa nuxurka rumaysadka. Markaad aragto xaqiiqda cusub ee qofka aad ku tahay Masiixa waxy beddeshaa fikirkaaga oo dhan, oo ay kujirto waxa aad hadda ku dhexjirto. Markaad garato Ciise inuu ku nool yahay naftaada, farqi weyn ayaa u dhexeeya sida aad awood ugu leedahay inaad wax ka qabatid arrimaha nolosha haatan.